ဒေါက်တာကျော်ဟန်သာမြင့် (သို့) မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဖော်ထုတ်ပြသူလူငယ်တစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခြင်း - For her Myanmar
အင်္ကျီတစ်ထည်ကို ချုပ်ဖို့ဆိုရင် တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့လူငါးယောက်လောက်ကို လိုက်မေးမှ အရင်ခေတ်က အင်္ကျီတစ်ထည်ရဲ့ ပုံစံရတယ်။
ဒီတစ်ပတ် အင်တာဗျူးကဏ္ဍမှာ ယောင်းတို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့သူက ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအဝတ်အစားတွေ၊ ရိုးရာအသုံးအဆောင်တွေကို ပြန်လည်ရှာဖွေဖော်ထုတ်တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ ကျော်ဟန်သာမြင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ ကျော်ဟန်သာမြင့်ဟာ သူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သိမှတ်ဖွယ်ရာတွေကို ရေးသားတတ်သလို၊ မြန်မာ့ရိုးရာ အင်္ကျီတွေကို ကိုယ်တိုင်ဝတ်ဆင်ကာ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဝေမျှတတ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဒီလိုတွေလုပ်ဖြစ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုတော့…
မေး- အရင်ဆုံး အစ်ကို့ရဲ့ အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါဦး။
ဖြေ- ကျွန်တော့် နာမည်က ကိုကျော်ဟန်သာမြင့်ပါ။ ဆေးတက္ကသိုလ်ကနေ ကျောင်းပြီးထားပြီး လက်ရှိမှာ ကုသရေးဆရာဝန်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေသူပါ။
မေး- ဒီလို မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတွေအကြောင်း ဘာကြောင့်လေ့လာဖော်ထုတ်ဖြစ်ခဲ့လဲ ဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါဦး အစ်ကို။
ဖြေ- ငယ်ငယ်ကတည်းက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းလေ့လာရတာ ဝါသနာပါတယ်။ နောက်ပြီး ထိုင်းကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဆုံတဲ့အခါ သူတို့ဆီမှာ ယဉ်ကျေးမှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထိန်းသိမ်းကြတယ် ပြန်ဖော်ထုတ်ကြတယ်။ ဒါတွေကို တွေ့တဲ့အခါ ကိုယ်တွေဆီမှာလည်း ဒါမျိုးလုပ်ပြချင်တဲ့ စိတ်ကူးရှိခဲ့တာနဲ့ပဲ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
စပြီး လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ ကျွန်တော် ကျီးပေါင်းဖြစ်လို့ အလုပ်ကနေ နားနေရတဲ့ အချိန်ပေါ့။ အဲဒီမှာ နားနေရတဲ့အတူတူ ဒီအလုပ်လေးတွေကို စလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ရင်းကနေ ပိုပျော်လာတယ်၊ စေတနာလည်း ပိုပါလာပြီး လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော်က လုပ်ငန်းခွင်ထဲပြန်ဝင်နေပြီဆိုတော့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေ လုပ်တာ ခဏနားထားပါတယ်။
မေး- မြန်မာရှေးခေတ်ဝတ်စုံတွေကို ဘယ်လိုမျိုး ရှာဖွေလေ့လာခဲ့ရသလဲ။
ဖြေ- ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေ ကိုယ့်ဘာသာရှာဖတ်တယ်၊ ဖတ်ရင်လည်း တိကျခိုင်မာတဲ့စာတွေဖတ်ဖြစ်တာပေါ့။ ဒါကြောင့် စာကြည့်တိုက်မှာ သွားရှာဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ – ပုသိမ်ထီးအကြောင်းသိချင်ရင် ပုသိမ်ထီးရဲ့ သမိုင်းအစကနေ ရှာဖတ်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က လက်တွေ့ကျတယ်။ ပုသိမ်ထီးအကြောင်းဖတ်ပြီးရင် ပုသိမ်ထီးကို ကိုယ်တိုင်ဆောင်းကြည့်၊ ကိုင်ကြည့်၊ ပုသိမ်ထီးလုပ်နည်းတွေကို သိချင်လာတယ်။
ဒါကြောင့် ရိုးရာပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီလို လေ့လာမှုတွေ လုပ်ပြီးတော့ စာတွေရေးပြီး Facebook ပေါ်မှာ Post တွေတင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စာတွေ ဖတ်ရတာထက်စာရင် ပုံတွေနဲ့ဆို လူတွေပိုစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
နောက်ပြီး တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ လူကြီးတွေကို သေသေချာချာလိုက်မေးရတာမျိုးတွေရှိတယ်။ အင်္ကျီတစ်ထည်ကို ချုပ်ဖို့ဆိုရင် တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့လူငါးယောက်လောက်ကို လိုက်မေးမှ အရင်ခေတ်က အင်္ကျီတစ်ထည်ရဲ့ ပုံစံရတယ်။
မေး- ဒီလိုမျိုး ရှေးခေတ်အဝတ်အစားတွေပြန်ချုပ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လို အခက်အခဲမျိုးတွေ ကြုံရလဲ အစ်ကို။
ဖြေ- အဓိက အခက်အခဲကတော့ ကိုယ်စရိတ်နဲ့ကိုယ်အစအဆုံးလုပ်ရတဲ့အတွက် ငွေကြေးသုံးစွဲမှုက အကန့်အသတ်ရှိနေတာပေါ့။ ပညာရှင်လူကြီးတွေကို ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ မေးရတဲ့အခါ ရှင်းပြပေးတဲ့သူရှိသလို မရှင်းပြပေးချင်တဲ့သူမျိုးလည်း ကြုံရတယ်။
ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ အခက်အခဲတစ်ခုက ကုန်ကျစရိတ်ပေါ့။ လူပိုစိတ်ဝင်စားအောင် မော်ဒယ်လ်တွေ ငှားရိုက်ရင် မော်ဒယ်လ်စရိတ်၊ ဓာတ်ပုံဆရာငှားရိုက်ရင်လည်း ကုန်ကျစရိတ်ကရှိတယ်လေ။
ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်ဝတ်ရိုက်တယ်။ ဓာတ်ပုံကိုတော့ အမေက ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ရိုက်ပေးတယ်။ Photographer တွေဆီက အကူအညီရတဲ့အခါလည်း Professional Camera နဲ့ ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကျစရိတ်ချုံ့တဲ့အနေနဲ့ တချို့အရာတွေဆို ကွန်ပျူတာနဲ့ပြုပြင်ရတာတွေရှိတယ်။ ဥပမာ – အင်္ကျီကို အရောင်တစ်ထည်တည်း ချုပ်ပြီး Photoshop နဲ့ ပြုပြင်ရတာပေါ့။
အဝတ်အစားတွေ ချုပ်တဲ့အခါ ကြုံရတာက ဥပမာ -သိုရင်းအင်္ကျီတစ်ထည်ကျွန်တော်ချုပ်တော့မယ်ပေါ့။ အဲဒီမှာ အင်္ကျီချုပ်ဆိုင်ကို ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ပုံစံ သေချာပြောပြတယ်။ အဲဒီခေတ်က အနံတိုပိတ်စတွေပဲ ပေါ်သေးတဲ့အတွက် အင်္ကျီလက်ကို အရှည်တစ်ဆက်တည်း မရဘူး။ နှစ်နံစပ်ချုပ်ရတယ်။ အဲဒီလိုပုံစံမျိုး ချုပ်ပေးပါလို့ သေသေချာချာမှာတယ်။
အင်္ကျီရလာတော့ တစ်ဆက်တည်း ချုပ်ထားတယ်။ နောက်တစ်ခါအပ်ရင် ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ပုံစံကို သေချာချရေးခိုင်းတယ်။ ရေးခိုင်းလည်း ချုပ်ချင်သလို ချုပ်လိုက်တာပဲ။ အဲဒါမျိုးတွေပေါ့..အစုံကြုံရပါတယ်။
မေး- အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေက ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းတာတွေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ ?
ဖြေ- ထိုင်းတွေ ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို သေသေချာချာထိန်းသိမ်းတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်ဆိုရင် အဝတ်အစားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြတိုက်ကအစ သီးသန့်ရှိတယ်။ အဆောက်အဦးတွေဆိုလည်း ရှေးလက်ရာတွေအတိုင်း ပြန်ဆောက်ပြတာတွေရှိတယ်။ ဥပမာ -ချင်းမိုင်က ဒါရာဝတီ ဟိုတယ်ဆို မြန်မာဘက်က မြနန်းစံကျော်နန်းတော်၊ မယ်နုအုတ်ကျောင်း၊ ကရင်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် ပုံစံတွေကို ပြန်ပေါင်းပြီး ဆောက်ထားတာ။
ထိုင်းတွေက မြန်မာယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဒီလိုမျိုးပြန်ဖော်ထုတ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်လို့ သူများလုပ်သွားတာကို စိတ်မကောင်းပေမဲ့ သူတို့ထိန်းသိမ်းပေးတော့လည်း မပျောက်ပျက်တော့ဘူးပေါ့လို့ အကောင်းမြင်ပေးပါတယ်။
မလေးရှားမှာဆို Culture Village ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်။ သူတို့ဆီမှာဆိုရင် ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လေ့လာရုံတင်မကဘူး ကိုယ်တိုင်ပါ ဝင်လုပ်လို့ရတဲ့ activity လေးတွေရှိတယ်။
မေး- မြန်မာပြည်က ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးထိန်းသိမ်းဖို့ လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေရှိရင်ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ- ရှိပါတယ်။ ခုနက ပြောသလို ကြည့်ရှုလေ့လာရုံတင်မက ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လို့ရတဲ့ Activity တွေလုပ်လို့ရတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပြခန်းတွေ၊ Culture Village လိုမျိုးတွေ လုပ်ချင်တယ်။ ဥပမာ – ဆွမ်းအုပ်ကို ကိုယ်တိုင်ပိုက်ကြည့်လို့ရအောင် စီစဉ်ပေးထားတာ၊ လွန်းရာကျော် ပိုးချိတ်တွေကို ကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ကိုင်ကြည့်ပြီး ဝတ်ကြည့်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတာမျိုးပေါ့။ ဧည့်သည်တွေက ချိတ်တွေကို ကိုယ်တိုင်ဝတ်ကြည့်ပြီး ကျက်သရေရှိလိုက်တာ ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ခံစားစေချင်တယ်။
ရိုးရာရွှေစွန်ညိုလို ကစားနည်းကို ကိုယ်တိုင်ဝင်ဆော့လို့ရတာမျိုးတွေ လုပ်ပေးချင်တယ်။
ပြတိုက်တွေမှာဆိုရင် မြန်မာ့ရိုးရာ ဒေါင်းမြီးယပ်တောင်ဆိုတာ ပြသထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့က မြင်ရတာ ကြည့်ရတာပဲရှိတာလေ။ ဒီလို ဒေါင်းမြီးယပ်တောင်ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ပြသပေးစေချင်တယ်။ ဒါမှ ဒီလိုရိုးရာနည်းလမ်းတွေ မပျောက်ကွယ်မှာ။
နောက်ပြီး အညာဒေသက ဖက်စိမ်းကွမ်းတောင်လုပ်နည်းဆိုရင် လုပ်နည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ တကယ်လုပ်တတ်တဲ့သူက နည်းတယ်။ အညာဘက်မှာတော့ ရှိတာပေါ့။ ထိုင်းမှာဆိုရင် ဒီလိုနည်းတွေအတွက် သင်တန်းတွေ ပြန်ပေးတာမျိုးရှိတယ်။ လုပ်နည်းစာအုပ်တွေရှိတယ်။ ဒီမှာဆိုလည်း ရှိသင့်တာပေါ့နော်။ နောက် တစ်နာရီစာ Burmese Cooking Class တွေ၊ Burmese Dance Class တွေ စီစဉ်ပေးချင်တယ်။
နောက်ပြီး ရှေးလက်ရာအဆောက်အဦးတွေ ဒီဘက်ခေတ်မှာ မကျန်တော့တာတွေရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို Replica လေးတွေပြန်ဆောက်စေချင်တယ်။ ဒါမှ စိတ်ဝင်စားသူတွေ လက်တွေ့ပြန်ကြည့်၊ ပြန်လေ့လာလို့ရမှာလေ။
မေး- လက်ရှိမှာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ လုပ်ဖို့ နားထားတယ်ဆိုတော့ အနာဂတ်မှာရော ဆက်လုပ်သွားဖို့ စိတ်ကူးရှိလား။
ဖြေ- ဆက်လုပ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်ဆိုတာကတော့ မသေချာသေးပါဘူး။ ကျွန်တော့ရဲ့ အဓိကအလုပ်ကိုပဲ အာရုံစိုက်သွားမှာမို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ တခြားစိတ်ဝင်စားလို့ လုပ်ချင်သူတွေရှိရင် ကူညီပေးသွားမှာပါ။
ကိုယ်သာ ယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းပေးနိုင်မယ့် အင်အားတစ်ခုခုရှိရင် ဆက်လုပ်ချင်ပါတယ်။ အခုလည်း မလုပ်တာသာ ရှိတာ ယဉ်ကျေးမှုတဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေရှိရင် အမှတ်တရဝယ်နေဖြစ်တုန်းပါပဲ။
ဒါကတော့ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကို တတ်စွမ်းသလောက်ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ ကိုကျော်ဟန်သာမြင့် မျှဝေပေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေပါပဲ။ အခုအချိန်မှာ အမေ့အလျော့ခံဖြစ်နေတဲ့ တစ်ချိန်ကမြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို အခုလို တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ မြန်မာလူငယ်တစ်ဦးက ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပေးနေတာ လေးစားဖို့လည်းကောင်းသလို အက်ဒမင့်အနေနဲ့ အတော်လည်း ဝမ်းသာမိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလို ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းဖော်ထုတ်နိုင်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ထပ်မံ ပေါ်ထွက်လာဖို့ မျှော်လင့်ရင်း…..
အင်ျကြီတဈထညျကို ခြုပျဖို့ဆိုရငျ တတျကြှမျးနားလညျတဲ့လူငါးယောကျလောကျကို လိုကျမေးမှ အရငျခတျေက အင်ျကြီတဈထညျရဲ့ ပုံစံရတယျ။
ဒီတဈပတျ အငျတာဗြူးကဏ်ဍမှာ ယောငျးတို့နဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြတဲ့သူက ဆရာဝနျတဈယောကျဖွဈသလို မွနျမာ့ရိုးရာယဉျကြေးမှုအဝတျအစားတှေ၊ ရိုးရာအသုံးအဆောငျတှကေို ပွနျလညျရှာဖှဖေျောထုတျတငျပွပေးခဲ့တဲ့ ဒေါကျတာ ကြျောဟနျသာမွငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒေါကျတာ ကြျောဟနျသာမွငျ့ဟာ သူ့ရဲ့ Facebook အကောငျ့ကနေ ယဉျကြေးမှုနဲ့ ပတျသကျတဲ့ သိမှတျဖှယျရာတှကေို ရေးသားတတျသလို၊ မွနျမာ့ရိုးရာ အင်ျကြီတှကေို ကိုယျတိုငျဝတျဆငျကာ ဓာတျပုံတှနေဲ့ ဝမြှေတတျသူလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဘာကွောငျ့ ဒီလိုတှလေုပျဖွဈခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုတော့…
မေး- အရငျဆုံး အဈကို့ရဲ့ အကွောငျးကို မိတျဆကျပေးပါဦး။
ဖွေ- ကြှနျတေျာ့ နာမညျက ကိုကြျောဟနျသာမွငျ့ပါ။ ဆေးတက်ကသိုလျကနေ ကြောငျးပွီးထားပွီး လကျရှိမှာ ကုသရေးဆရာဝနျအလုပျကို လုပျကိုငျနသေူပါ။
မေး- ဒီလို မွနျမာ့ယဉျကြေးမှုတှအေကွောငျး ဘာကွောငျ့လလေ့ာဖျောထုတျဖွဈခဲ့လဲ ဆိုတာ ရှငျးပွပေးပါဦး အဈကို။
ဖွေ- ငယျငယျကတညျးက မွနျမာ့ယဉျကြေးမှုအကွောငျးလလေ့ာရတာ ဝါသနာပါတယျ။ နောကျပွီး ထိုငျးကမိတျဆှတှေနေဲ့ ဆုံတဲ့အခါ သူတို့ဆီမှာ ယဉျကြေးမှုကို ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ထိနျးသိမျးကွတယျ ပွနျဖျောထုတျကွတယျ။ ဒါတှကေို တှတေဲ့အခါ ကိုယျတှဆေီမှာလညျး ဒါမြိုးလုပျပွခငျြတဲ့ စိတျကူးရှိခဲ့တာနဲ့ပဲ လုပျဖွဈခဲ့တာပါ။
စပွီး လုပျဖွဈခဲ့တာကတော့ ကြှနျတျော ကြီးပေါငျးဖွဈလို့ အလုပျကနေ နားနရေတဲ့ အခြိနျပေါ့။ အဲဒီမှာ နားနရေတဲ့အတူတူ ဒီအလုပျလေးတှကေို စလုပျဖွဈခဲ့တယျ။ အဲဒီလိုလုပျရငျးကနေ ပိုပြျောလာတယျ၊ စတေနာလညျး ပိုပါလာပွီး လုပျဖွဈခဲ့တယျ။ အခုတော့ ကြှနျတျောက လုပျငနျးခှငျထဲပွနျဝငျနပွေီဆိုတော့ ယဉျကြေးမှုနဲ့ပတျသကျတာတှေ လုပျတာ ခဏနားထားပါတယျ။
မေး- မွနျမာရှေးခတျေဝတျစုံတှကေို ဘယျလိုမြိုး ရှာဖှလေလေ့ာခဲ့ရသလဲ။
ဖွေ- ယဉျကြေးမှုနဲ့ပတျသကျတာတှေ ကိုယျ့ဘာသာရှာဖတျတယျ၊ ဖတျရငျလညျး တိကခြိုငျမာတဲ့စာတှဖေတျဖွဈတာပေါ့။ ဒါကွောငျ့ စာကွညျ့တိုကျမှာ သှားရှာဖတျဖွဈတယျ။ ဥပမာ – ပုသိမျထီးအကွောငျးသိခငျြရငျ ပုသိမျထီးရဲ့ သမိုငျးအစကနေ ရှာဖတျဖွဈတယျ။ ပွီးတော့ ကြှနျတျောက လကျတှကေ့တြယျ။ ပုသိမျထီးအကွောငျးဖတျပွီးရငျ ပုသိမျထီးကို ကိုယျတိုငျဆောငျးကွညျ့၊ ကိုငျကွညျ့၊ ပုသိမျထီးလုပျနညျးတှကေို သိခငျြလာတယျ။
ဒါကွောငျ့ ရိုးရာပစ်စညျးတှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ လလေ့ာမှုတှေ လုပျခဲ့တယျ။ အဲဒီလို လလေ့ာမှုတှေ လုပျပွီးတော့ စာတှရေေးပွီး Facebook ပျေါမှာ Post တှတေငျတယျ။ ဒါပမေဲ့ စာတှေ ဖတျရတာထကျစာရငျ ပုံတှနေဲ့ဆို လူတှပေိုစိတျဝငျစားမယျလို့ ထငျတယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲ ဓာတျပုံတှေ ရိုကျဖွဈခဲ့တာပါ။
နောကျပွီး တတျကြှမျးနားလညျတဲ့ လူကွီးတှကေို သသေခြောခြာလိုကျမေးရတာမြိုးတှရှေိတယျ။ အင်ျကြီတဈထညျကို ခြုပျဖို့ဆိုရငျ တတျကြှမျးနားလညျတဲ့လူငါးယောကျလောကျကို လိုကျမေးမှ အရငျခတျေက အင်ျကြီတဈထညျရဲ့ ပုံစံရတယျ။
မေး- ဒီလိုမြိုး ရှေးခတျေအဝတျအစားတှပွေနျခြုပျပွီး ဓာတျပုံရိုကျတဲ့အခါ ဘယျလို အခကျအခဲမြိုးတှေ ကွုံရလဲ အဈကို။
ဖွေ- အဓိက အခကျအခဲကတော့ ကိုယျစရိတျနဲ့ကိုယျအစအဆုံးလုပျရတဲ့အတှကျ ငှကွေေးသုံးစှဲမှုက အကနျ့အသတျရှိနတောပေါ့။ ပညာရှငျလူကွီးတှကေို ကိုယျသိခငျြတဲ့ အကွောငျးအရာတှေ မေးရတဲ့အခါ ရှငျးပွပေးတဲ့သူရှိသလို မရှငျးပွပေးခငျြတဲ့သူမြိုးလညျး ကွုံရတယျ။
ဓာတျပုံရိုကျတဲ့အခါ အခကျအခဲတဈခုက ကုနျကစြရိတျပေါ့။ လူပိုစိတျဝငျစားအောငျ မျောဒယျလျတှေ ငှားရိုကျရငျ မျောဒယျလျစရိတျ၊ ဓာတျပုံဆရာငှားရိုကျရငျလညျး ကုနျကစြရိတျကရှိတယျလေ။
ဒါကွောငျ့ ကိုယျတိုငျဝတျရိုကျတယျ။ ဓာတျပုံကိုတော့ အမကေ ဖုနျးကငျမရာနဲ့ ရိုကျပေးတယျ။ Photographer တှဆေီက အကူအညီရတဲ့အခါလညျး Professional Camera နဲ့ ရိုကျဖွဈပါတယျ။
ကုနျကစြရိတျခြုံ့တဲ့အနနေဲ့ တခြို့အရာတှဆေို ကှနျပြူတာနဲ့ပွုပွငျရတာတှရှေိတယျ။ ဥပမာ – အင်ျကြီကို အရောငျတဈထညျတညျး ခြုပျပွီး Photoshop နဲ့ ပွုပွငျရတာပေါ့။
အဝတျအစားတှေ ခြုပျတဲ့အခါ ကွုံရတာက ဥပမာ -သိုရငျးအင်ျကြီတဈထညျကြှနျတျောခြုပျတော့မယျပေါ့။ အဲဒီမှာ အင်ျကြီခြုပျဆိုငျကို ကြှနျတျောလိုခငျြတဲ့ ပုံစံ သခြောပွောပွတယျ။ အဲဒီခတျေက အနံတိုပိတျစတှပေဲ ပျေါသေးတဲ့အတှကျ အင်ျကြီလကျကို အရှညျတဈဆကျတညျး မရဘူး။ နှဈနံစပျခြုပျရတယျ။ အဲဒီလိုပုံစံမြိုး ခြုပျပေးပါလို့ သသေခြောခြာမှာတယျ။
အင်ျကြီရလာတော့ တဈဆကျတညျး ခြုပျထားတယျ။ နောကျတဈခါအပျရငျ ကြှနျတျောလိုခငျြတဲ့ ပုံစံကို သခြောခရြေးခိုငျးတယျ။ ရေးခိုငျးလညျး ခြုပျခငျြသလို ခြုပျလိုကျတာပဲ။ အဲဒါမြိုးတှပေေါ့..အစုံကွုံရပါတယျ။
မေး- အိမျနီးခငျြးနိုငျငံတှကေ ရိုးရာယဉျကြေးမှုထိနျးသိမျးတာတှကေို ဘယျလိုမွငျလဲ ?
ဖွေ- ထိုငျးတှေ ဆိုရငျ သူတို့ရဲ့ ယဉျကြေးမှုတှကေို သသေခြောခြာထိနျးသိမျးတယျ။ ယဉျကြေးမှုပွတိုကျဆိုရငျ အဝတျအစားနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ပွတိုကျကအစ သီးသနျ့ရှိတယျ။ အဆောကျအဦးတှဆေိုလညျး ရှေးလကျရာတှအေတိုငျး ပွနျဆောကျပွတာတှရှေိတယျ။ ဥပမာ -ခငျြးမိုငျက ဒါရာဝတီ ဟိုတယျဆို မွနျမာဘကျက မွနနျးစံကြျောနနျးတျော၊ မယျနုအုတျကြောငျး၊ ကရငျအမြိုးသားစာကွညျ့တိုကျ ပုံစံတှကေို ပွနျပေါငျးပွီး ဆောကျထားတာ။
ထိုငျးတှကေ မွနျမာယဉျကြေးမှုတှကေို ဒီလိုမြိုးပွနျဖျောထုတျတာတှေ ရှိပါတယျ။ ကိုယျတိုငျမလုပျနိုငျလို့ သူမြားလုပျသှားတာကို စိတျမကောငျးပမေဲ့ သူတို့ထိနျးသိမျးပေးတော့လညျး မပြောကျပကျြတော့ဘူးပေါ့လို့ အကောငျးမွငျပေးပါတယျ။
မလေးရှားမှာဆို Culture Village ဆိုတာမြိုးတှရှေိတယျ။ သူတို့ဆီမှာဆိုရငျ ယဉျကြေးမှုတှကေို လလေ့ာရုံတငျမကဘူး ကိုယျတိုငျပါ ဝငျလုပျလို့ရတဲ့ activity လေးတှရှေိတယျ။
မေး- မွနျမာပွညျက ယဉျကြေးမှုနဲ့ ပတျသကျပွီးထိနျးသိမျးဖို့ လုပျခငျြတဲ့ စိတျကူးလေးတှရှေိရငျပွောပွပေးပါဦး။
ဖွေ- ရှိပါတယျ။ ခုနက ပွောသလို ကွညျ့ရှုလလေ့ာရုံတငျမက ကိုယျတိုငျပါဝငျလို့ရတဲ့ Activity တှလေုပျလို့ရတဲ့ ယဉျကြေးမှုပွခနျးတှေ၊ Culture Village လိုမြိုးတှေ လုပျခငျြတယျ။ ဥပမာ – ဆှမျးအုပျကို ကိုယျတိုငျပိုကျကွညျ့လို့ရအောငျ စီစဉျပေးထားတာ၊ လှနျးရာကြျော ပိုးခြိတျတှကေို ကိုယျတိုငျထိတှကေို့ငျကွညျ့ပွီး ဝတျကွညျ့လို့ရအောငျစီစဉျပေးထားတာမြိုးပေါ့။ ဧညျ့သညျတှကေ ခြိတျတှကေို ကိုယျတိုငျဝတျကွညျ့ပွီး ကကျြသရရှေိလိုကျတာ ဆိုတဲ့ ခံစားခကျြမြိုး ခံစားစခေငျြတယျ။
ရိုးရာရှစှေနျညိုလို ကစားနညျးကို ကိုယျတိုငျဝငျဆော့လို့ရတာမြိုးတှေ လုပျပေးခငျြတယျ။
ပွတိုကျတှမှောဆိုရငျ မွနျမာ့ရိုးရာ ဒေါငျးမွီးယပျတောငျဆိုတာ ပွသထားတယျ။ ကြှနျတျောတို့က မွငျရတာ ကွညျ့ရတာပဲရှိတာလေ။ ဒီလို ဒေါငျးမွီးယပျတောငျကို ကိုယျတိုငျလုပျလို့ရတဲ့ နညျးလမျးတှေ ပွသပေးစခေငျြတယျ။ ဒါမှ ဒီလိုရိုးရာနညျးလမျးတှေ မပြောကျကှယျမှာ။
နောကျပွီး အညာဒသေက ဖကျစိမျးကှမျးတောငျလုပျနညျးဆိုရငျ လုပျနညျးအမြိုးမြိုးရှိတယျ။ တကယျလုပျတတျတဲ့သူက နညျးတယျ။ အညာဘကျမှာတော့ ရှိတာပေါ့။ ထိုငျးမှာဆိုရငျ ဒီလိုနညျးတှအေတှကျ သငျတနျးတှေ ပွနျပေးတာမြိုးရှိတယျ။ လုပျနညျးစာအုပျတှရှေိတယျ။ ဒီမှာဆိုလညျး ရှိသငျ့တာပေါ့နျော။ နောကျ တဈနာရီစာ Burmese Cooking Class တှေ၊ Burmese Dance Class တှေ စီစဉျပေးခငျြတယျ။
နောကျပွီး ရှေးလကျရာအဆောကျအဦးတှေ ဒီဘကျခတျေမှာ မကနျြတော့တာတှရှေိတယျ။ အဲဒါတှကေို Replica လေးတှပွေနျဆောကျစခေငျြတယျ။ ဒါမှ စိတျဝငျစားသူတှေ လကျတှပွေ့နျကွညျ့၊ ပွနျလလေ့ာလို့ရမှာလေ။
မေး- လကျရှိမှာ ယဉျကြေးမှုနဲ့ ပတျသကျတာတှေ လုပျဖို့ နားထားတယျဆိုတော့ အနာဂတျမှာရော ဆကျလုပျသှားဖို့ စိတျကူးရှိလား။
ဖွေ- ဆကျလုပျဖွဈမလုပျဖွဈဆိုတာကတော့ မသခြောသေးပါဘူး။ ကြှနျတော့ရဲ့ အဓိကအလုပျကိုပဲ အာရုံစိုကျသှားမှာမို့ပါ။ ဒါပမေဲ့ တခွားစိတျဝငျစားလို့ လုပျခငျြသူတှရှေိရငျ ကူညီပေးသှားမှာပါ။
ကိုယျသာ ယဉျကြေးမှုကိုထိနျးသိမျးပေးနိုငျမယျ့ အငျအားတဈခုခုရှိရငျ ဆကျလုပျခငျြပါတယျ။ အခုလညျး မလုပျတာသာ ရှိတာ ယဉျကြေးမှုတဲ့ပတျသကျတဲ့ ပစ်စညျးလေးတှရှေိရငျ အမှတျတရဝယျနဖွေဈတုနျးပါပဲ။
ဒါကတော့ မွနျမာ့ရိုးရာယဉျကြေးမှုတှကေို တတျစှမျးသလောကျဖျောထုတျပေးခဲ့တဲ့ ကိုကြျောဟနျသာမွငျ့ မြှဝပေေးခဲ့တဲ့ အကွောငျးတှပေါပဲ။ အခုအခြိနျမှာ အမအေ့လြော့ခံဖွဈနတေဲ့ တဈခြိနျကမွနျမာလူမြိုးတို့ရဲ့ ယဉျကြေးမှုတှကေို အခုလို တနျဖိုးထားတတျတဲ့ မွနျမာလူငယျတဈဦးက ပွနျလညျဖျောထုတျပေးနတော လေးစားဖို့လညျးကောငျးသလို အကျဒမငျ့အနနေဲ့ အတျောလညျး ဝမျးသာမိပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဒီလို ယဉျကြေးမှုကို ထိနျးသိမျးဖျောထုတျနိုငျမယျ့ ပုဂ်ဂိုလျမြား ထပျမံ ပျေါထှကျလာဖို့ မြှျောလငျ့ရငျး…..
Tags: culture, Heritage, Interview, professional, Tradition